किन दिइँयो सीके राउतलाई विमानस्थलकाे भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न? -
किन दिइँयो सीके राउतलाई विमानस्थलकाे भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न?
१० असार २०७६, मंगलवार १५:५३ 3689 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ – भीआईपीको सूचीमा नपर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई पनि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले भीआईपी कक्षमा प्रयोग गर्न दिएको छ।
भीआईपी कक्ष सचिव स्तरका विशिष्ट व्यक्ति र मननीयहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, गृह मन्त्रालयको एक कलको भरमा सीके राउतलाई भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न विमानस्थलले जनाएको छ। भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्ने परिभाषाभित्र सीके राउत कतै पनि पर्दिनन् । तर उनका लागि भीआईपी कक्ष खोल्न गृहले नै फोन गर्न बाध्य भयो।
‘सीके राउतलाई भिआईपी कक्ष उपलब्ध गराउन गृहबाट जानकारी आएकोले प्रयोग गर्न दिउको विमानस्थलका प्रमुख राजकुमार क्षेत्रीले बताए। उनले भने, ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले गृह मन्त्रालायको आदेशमा सीके राउतलाई भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न दिएको हो।’
सीके राउत गत जेठ २६ बेलायततिर गएको । उनलाई अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा उच्च सम्मानका साथ बोलाइएको र त्यहाँ उनले आफ्नो मन्तब्य राखेका थिए। त्यसपछि स्वदेश फर्केका सीके राउतलाई विमानस्थले भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न दिएको थियो।